Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka soo horeestay go’aankii shirkii Garowe. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka soo horeestay go’aankii shirkii Garowe.
Star FM October 30, 2018
Madaxweyne Ku xigeenka maamulka Puntland C/xakiin Xaaji Cumar Camey ayaa ka soo horjeestay go’aamadii ka soo baxay shirkii ugu danbeeyay ee maalmo ka hor madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ku soo gabagabeeyeen magaalada Garowe.
Madaxweyne Ku xigeenka maamulka Puntland oo warbaahinta gudaha Soomaaliya la hadlay ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay khilaafka sii xoogaysanaya ee ka dhex jira dowlada fedraalka Soomaaliya iyo maamulada Xubnaha ka ah.
Wuxuuna eedaymaha ugu badan u jeediyay madaxda gobolada Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay arimo badan dhankooda ka socon layihiin isagoo sidoo kale taageeray baaqyo horay uga soo baxay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ku aadanaa in xal laga agaro khilaafka hada jira.
Dhanka kale Ciidamada Ammaanka maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay Askar ka tirsan Ciidanka maamulkaas oo la sheegay inay wiil arday ah xalay Ku dileen Magaalada Garowe ee Caasimadda maamulka Puntland.
Wiilka ardayga ah ayaa dhiganayay jaamacadda Boosaaso University faraceeda magaalada Garoowe,gaar ahaanna kulliyadda Caafimaadka,sida laga soo xigtay eheladiisa.
Taliyaha Ciidamada Booliska Magaalada Garowe ayaa warbaahinta u sheegay in la qabtay Askar lagu tuhmaayo inay ka dambeeyeen falkaasi,islamarkaana dhawaan sharciga la horkeeni doono.
← DHAGEYSO Dowlada Soomaaliya oo markii ugu horaysay ka hadashay soomaali laga celiyay garoonka Nairobi.
Guardiola oo ka xun in shaqada laga ceyriyo tababaraha kooxda Real Madrid Julen Lopetegui →